वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाले किन गर्छन आत्महत्या ? - Everest Dainik - News from Nepal
वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाले किन गर्छन आत्महत्या ?
काठमाडौं, माघ १२ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसँगै विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बृद्धि हुनु अब धेरैलाई समान्य लाग्न थालेको छ ।
दैनिक १२ देखि १५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका बोला दैनिक ३ देखि ४ वटा शव विदेशबाट आउने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ ।
याे पनि पढ्नुस कर्मचारीले कार्यालयमै आत्महत्या
धेरै महिलाले आत्महत्या गर्नुलाई विज्ञहरुले विदेशमा हुने शोषण र नेपालबाट सोचेजस्तो वातावरण त्यहाँ नपाउनुलाई कारणका रुपमा लिने गरेको छन् ।
”आत्महत्या गर्नुको कारण खोज्न अहिलेसम्म गहिरो अध्ययन त भएको छैन, सरसर्ती हेर्दा महिलामाथि हुने अत्याचार नै प्रमुख कारण हो ।” बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापाले भनिन् ।
याे पनि पढ्नुस वैदेशिक रोजगारीमा जानुको समस्या भेटियो तर समाधान भेटिएन
ट्याग्स: baidesik rojgar, sucide